Javier Mascherano oo lala xiriirinayo kooxdiisii hore ee Liverpool | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Javier Mascherano oo lala xiriirinayo kooxdiisii hore ee Liverpool
Javier Mascherano oo lala xiriirinayo kooxdiisii hore ee Liverpool
Muqdisho – Liverpool ayaa lagu soo warramayaa inay dalab u dirtay daafaceedii hore ee Javier Mascherano, todobo sano ka dib markii uu markii uu u dhaqaaqay Barcelona.
33 jirkaan ayaa qandaraaskiisa uu Camp Nou ku joogo waxa uu ku egyahay sanadka 2019, laakiin waxaa lasoo sheegayaa inuu dhaqaaqayo marka uu furmo suuqa sida ugu dhaqsaha badan xagaaga soo socda, iyadoo ciyaaryahanka uu dhawaan qirtay inuu Analys gareyn doono xaaladiisa.
Sida laga soo xigtay wargeyska Diario Gol, xiddiga reer Argentine ayaa durbadiiba helay seddex dalab, oo uu ku jiro mid ka yimid Reds, halkaas oo uu ku dhawaad 100 ka saftay Premier League intii u dhaxeysay 2007 iyo 2010.
Wargeyska ayaa sheeganaya in Lionel Messi uu ku qanacsan yahay inuu ku fikirayo xiddigaan inuu durbadiiba go’aansado inuu baxo, islamarkaana uu raadsado koox uu ku biiro xagaaga soo socda, iyadoo Barca la sheegay inay diyaar u tahay inuu si xor ah uga tago.
Liverpool ayaana lagu soo waramayaa in ay ku soo biirtay tartanka loogu jiro Mascherano waxeyna kula soo biirtay kooxaha Paris Saint-Germain iyo kooxda heysata horyaalka Serie A ee Juventus.
Previous: Ciyaartooyda ugu badan ee kubadaha burburiyey tan iyo markii uu bilaawday xilli ciyaareedkan horyaalka EPL-ka..
Next: Dries Mertens oo sheegay in kooxda Manchester City aysan aheyn mid ka fogaan karta in laga badiyo.